Daawo Muuqaal Ahaan Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Masar oo gudaha baarlamaanka addin ku dhuftay,markii la gaaray salaaddii casar - iftineducation.com
aadan21 / February 19, 2012
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Masar oo gudaha baarlamaanka addin ku dhuftay
iftineducation.com – Arrin la yaab leh ayaa ka dhex dhacday gudaha baarlamaanka Masar,halkaasoo shir uga socday xildhibaanada ku jira baarlamaanka Masar.
Garyaqaan Mamduux Ismaaciil oo isagu u janjeera dhinaca salafiyiinta Masar,ayaa istaagay intuu shirka socday galabnimadii maanta (07/02/2012) kuna dhuftay addinkii salaadda casar.
Guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Muxammad Sacad ayaa si xoog leh u hujuumay intuu garyaqaanka addinka waday,wuxuuna ku yiri:kuuma oggolaanayo in aad addinto,nagamana badisid islaamnimada
Golaha baarlamaanka ma’ahan meel salaad lagu tukado ee waa meel lagu hadlo,adiguna kama aqoon wanaagsanid xildhibaanada kale,haddii aad doontidna in aad tukato,waxaa jira meel loogu talogalay ee meeshaasi aad,haddii aad addimaysidna fasax qaado.
Dhinaca kale mar ay saxaafadu wax ka weydiiyeen sababta uu garyaqaanka u addimay,wuxuu sheegay:in uu marhore ka codsaday guddoomiyaha in waqtiyo loo sameeyo inta uu shirka socdo,tukashada salaadaha,hayeeshe buu yiri garyaqaaanku wax jawaab ah kama helin guddoomiyaha,garyaqaanku wuxuu intaas raaciyay innagu ma joogno Vatikan,balse waxaanu joognaa waddan muslim ah.
Odey Soomaliyeed oo La ildaran Jaceyl uu u Qaaday Gabar 25 jir ah